Ma habboontahay inaad kafiiriso waxyaabaha kujira shaashadaha ballaaran? | Martech Zone
Ma habboon tahay inaad kafiiriso waxyaabaha kujira shaashadaha ballaaran?
Arbacada, Janaayo 30, 2013 Axad, Maarso 24, 2013 Douglas Karr
Waxaan jeclaan lahaa khabiir khibrad u leh khibrad u leh qormadan. Waxaan daawanaayay marba marka ka dambaysa goobaha teknolojiyaddu ay kor u qaadayaan aragtida muuqaalka (aaladda la arki karo ee aaladdaada) runtiina anigu ma aanan dhicin. Ma aaminsani taas, haddii aad xal dheeraad ah leedahay waxaad u baahan tahay inaad qaraarkaas isticmaasho.
Halkan waxaa ah burburka go'aamada ugu sarreeya ee ku saabsan Martech Zone:
Xalka ugu caansan, sida aad arki karto, waa 1366 × 768. Tani waa wax badan qaraarka caadiga ah ee laptop-ka ee suuqa hadda. Saami ahaan, waa sida shaashaddaasi u egtahay:
Sida aad u aragto shaashaddu aad iyo aad ayey u ballaaran tahay oo waxyar wey gaaban tahay. In kasta oo ay sameyso shaashad weyn oo lagu hagaajiyay daawashada fiidiyowyada HD, runti maahan shaashad loogu talagalay bogagga internetka iyo akhriska. Waxaanuna fiirinaa fiidiyowyada meel fog… ugama dhowa meesha aan ku aqrinayno qoraalka kuna qorayo kumbuyuutarka. Shaashadda toosan waxay u noqon doontaa xallin aad u wanaagsan tan, maaddaama websaydhyada ay ku kala duwan yihiin dherer ka badan inta ay ku ballacayaan
Marka, waxaan arkaa duulaanka websaydhada loogu talagalay in lagu kordhiyo aragtida aragtida mana aanan iibin. Wargeysyada ayaa helay waqti fog kahor in dadku wax ku akhriyaan xariiqyo taagan, oo aan ahayn kuwa dhaadheer oo dhaadheer. Diiradeena waxay u egtahay inay luntay markaan ka gudubno shaashadda. U dhaqaaqida walxaha dhanka bidix, ama dhanka midig waxay ka dhigeysaa mid aan diirada saarin sida aan u aqrinayo nuxurka, sidaa darteed qeybaha labaad sida dhinac dhinac ayaa gebi ahaanba la iska indhatiraa.
Iyada oo taasi jirto, ma doonayo inaan dib u naqshadeeyo Martech Zone shaashad si aad ula wareegto dhismahaas jiifka ah wakhti dhow. Naqshadeynta kormeeraha ayaa ka duwan khibrada qalabka mobilada ama kaniiniga waxaanan sii wadaynaa inaan khibradahaas ka dhigno kuwo gaar ah. Ballaadheenna ku jira baloogga ayaa ku fiican akhriska kor ilaa hoos iyo aragtida gees-gees sida aan u aragno waxyaabaha muhiimka ah. Mawduucyadeena aasaasiga ahi waa 640px ballaaran si loo waafajiyo cabbirka fiidiyowga ee caadiga ah iyo dhinac dhinac ah oo 300px ballaaran u ah xayeysiinta caadiga ah.
Maxay kula tahay Miyay tahay inaan aadno marinka goobaha kale? Mise waxaan ku socdaa wadada saxda ah ee qaabkayaga hadda jira?
Tags: 1024x7681366x768designkormeerka hdkormeeraha weynKormeerkailaali qaraaradaqiyaaso kormeerqaraaradaTechgaroonka diyaaradahakormeer ballaaran
Jooji Hadalka oo Dhageyso
Maxay Codsiyada Mobiladu U Kala Duwan Yihiin
Jan 31, 2013 saacadu markay ahayd 7:39 PM
Ma dhihi karo waxaan ahay khabiir khibrad u leh isticmaale, si kastaba ha noqotee waxaan dhisayay goobo muddo dheer ah, qof walbana waan ku riixayaa ugu yaraan naqshad jawaab celin ah, haddii kaliya aan daryeelo dhibaatooyinka aad qabto soo jeeda
Haddii aad eegto boggaga sida Mashable, The Verge, iyo xitaa NPR, waxaad u sheegi kartaa inay u wareegeen naqshad aad u ballaaran sida aad sheegtay oo aan shaqsiyan u jeclahay, sida aan u shaqeeyo oo aan u akhriyo waxyaabo badan oo la xiriira shaqada 32 ″ shaashad
Si kastaba ha noqotee, feker ahaanteyda markay timaado boggaga sida kuwaaga oo kale, waa inaan isweydiiyo maxaa loo huray iyo nooca miisaaniyad ee aad u baahan tahay inaad beddesho.
Soo-saaraha aniga igu jira wuxuu kugula talin lahaa in lagu tijaabiyo nashqadaha ballaaran ee ku saabsan waxyaabaha gaarka ah, oo la adeegsanayo dib-u-habeyn muuqaal gaar ah, ka dibna halkaas ka sii wad
Waxaan ogaadey in bogagga sida Verge iyo Mashable, qayb aad u fiican ay u baahan tahay qol wanaagsan, iyo naqshadaynta ballaadhan ayaa runtii ka caawisa intaas.
Jan 31, 2013 saacadu markay ahayd 9:46 PM
Waad ku mahadsantahay aragtidan weyn, Doug! Xaqiiqdii waxaan maalgashan doonnaa haddii ay jiraan caddayn muujinaya in qaabab ballaadhan, jawaabo ah ay hagaajinayaan akhriska iyo ka-qaybgalka goobaha. Ma jirtaa caddeyn rasmi ah oo tan ku saabsan?